प्रारम्भिक नतिजामा एमाले र कांग्रेसबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा | Mechikali Daily
प्रारम्भिक नतिजामा एमाले र कांग्रेसबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १६ असार २०७४, शुक्रबार ०५:२२
बुटवल, । स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा मतगणना भइरहेको छ । बुधबार प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलबस्तु, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली, झापा, भोजपुरलगायत तीनवटै प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ ।
बुधबार रातिदेखि नै मतगणना सुरु भएको कतिपय तहको नजिता आइरहेका छन् भने केही स्थानमा गणनाको प्रक्रिया बिहीबार रातिसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन । बढी मतदाता रहेका महानगर, उपमहानगरको परिणाम ७ दिनभित्र र अन्तको ३ दिनभित्र आउने गरी गणनाको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १५ हजार ३८ पदका लागि ६२ हजार ४ सय ८ प्रतिस्पर्धी छन् । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते भएको प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।
स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । प्रदेश नं. १ मा एमाले तथा प्रदेश नं. ५ र ७ मा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेका छ । धेरै स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेको कांग्रेसले तालमेलका कारण आफूलाई अग्र स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ । पहिलो चरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले धेरै स्थानीय तह जितेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको चुनावमा धेरै स्थानमा चुनावी तालमेल गरेका छन् ।
बिहीबार अबेर रातिसम्मको प्रारम्भिक मत गणनामा नेपाली कांग्रेसले एक स्थानीय तहमा जीत हासिल गरेको छ भने ६० स्थानीय तहको प्रमुख÷अध्यक्षतामा अग्रता लिएको छ । यस्तै एमालेले ७० स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले २० स्थानमा अग्रता लिएको छ ।
बिहीबार राति यो समाचार तयार पारुञ्जेल रुपन्देहीमा धेरै स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसले सुरुवाती अग्रता लिएको छ । बुटवल उप–महानगरपालिका, देवदह नगरपालिकासहितका गाउँपालिकाहरुमा कांग्रेसले अग्रता कायम गरिरहँदा एमालेले तिलोत्तमा र सैनामैनामा अग्रता कायम गरेको छ । निकै थोरै मत गणना भएकाले प्रारम्भिक नतिजाकै भरमा धेरै अनुमान लगाउन कठिन छ । रुपन्देहीमा सैनामैनाको वडा नं. ९ बाट एमालेले आफ्नो खाता खोलेको छ । वडा नं. ९ मा एमालेको प्यानलनैं विजयी भएको छ । एमालेका वडाध्यक्षले ७५३ ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेदवारले ४१० मा चित्त बुझाउनु पर्यो । सो वडामा एमाले मेयर पदका उम्मेदवार चित्र केसीले ७३३ मत ल्याउँदा कांग्रेसका फणिन्द्र शर्माले ४३१ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै बुटवल वडा नं. १ मा पनि एमाले विजयी भएको छ । सो वडामा एमालेका महेन्द्र लिगलको प्यानल विजयी भएको हो । लिगलले कांग्रेसका नरेन्द्र बस्नेतलाई १३५ मत अन्तरले पछि पारेका हुन् । लिगलले ६६० मत प्राप्त गर्दा बस्नेत ५२५ मा रोकिए । यस्तै महिला वडा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसकी ज्ञानकुमारी लिगलले ६२७ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी छिन् । यस्तै दलित महिला सदस्य र दुवै खुला सदस्य एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । सो वडाबाट कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनका मेयर पदका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेले एमालेका शिव सुवेदीले भन्दा ३८३ बढी मत पाएका छन् । पाण्डले १८७१ मत गन्दा ९७७ प्राप्त गरेका छन् भने सुवेदीले ५९४ प्राप्त गरेका छन् । तर उपमेयरमा एमालेकी गोमा आचार्यले गठबन्धनका जगत बहादुर पोखरेलले भन्दा दुई मत बढी मत ल्याएकी छिन् । आचार्यले ५८४ र पोखरेलले ५८२ मत प्राप्त गरेका हुन् । धेरै लामो समयदेखि कांग्रेसले आफ्नो गढ मान्दै आएको बुटवल–१ मा एमालेले वडाध्यक्ष जितेको हो । कांग्रेसले यसलाई आफ्नो जीतको सूचीमा राखेको थियो ।
यस्तै रातिसम्मको तिलोत्तमा नगरपालिकामा वडा नं. १ को मतगणनामा एमाले र कांग्रेसबीच तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । राति यो समाचार तयार पार्दासम्म एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार बासुदेव घिमिरेले अग्रता लिएका छन् भने कांग्रेस–जनमुक्ति गठबन्धन मेयर पदका उम्मेदवार रामकृष्ण खाँणले उनलाई पछ्याइरहेका छन् । यस्तै एमाले वडाध्यक्षका उम्मेदवार पनि अगाडि देखिएका छन् । यस्तै रुपन्देहीको सियारी र कञ्चन गाउँपालिकाको प्रारम्भिक नतिजामा एमालेले अग्रता लिएको छ । लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा स्वतन्त्र (राजपा) ले अग्रता कायम गरेको छ । गैडहवा गाउपालिका नेपाली कांगे्रस, मायादेवी गाउपालिका संघीय समाजबादी फोरम निकटका स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका छन् ।